Jargon Buster nke ụlọ akwụkwọ
Ụlọ akwụkwọ na -ejikarị ọtụtụ ndebiri na mmalite. Anyị etinyela ụfọdụ ozi gbasara ndị ị nwere ike izute.
Mmezu - Na -akọwa ma nweta ihe ya bụ ntụgharị ọkwa ị nwetara na ọganihu i megoro site na mbido.
AfL - Ntụle maka Mmụta - Ntụle maka Mmụta bụ usoro ịchọ na ịkọwa ihe akaebe maka ndị mmụta na ndị nkuzi ha ga -eji. kpebie ebe ụmụ akwụkwọ nọ na mmụta ha, ebe ọ dị mkpa ka ha gaa yana ụzọ kacha mma isi ruo ebe ahụ
ASD - Nsogbu ụdịdị dị iche iche nke Autism
AST - Onye nkuzi nka dị elu
AT - Onye nkuzi nkuzi
ATL - Njikọ ndị nkuzi na ndị nkuzi
Nweta - Ezi ọkwa e nwetara na/ma ọ bụ nsonaazụ ya.
Ebumnuche ebumnobi - Ọkwa ọkwa akọwapụtara nke ọma nke a na -atụ anya ka nwata akwụkwọ nweta na isiokwu ọ bụla na ọkwa igodo ọ bụla na National. Usoro ọmụmụ
Ngwakọta - Ka isekọ ụda n'otu n'otu ka ịkpọpụta otu okwu, dịka flaakọ, agwakọtara ọnụ, gụọ flaapu
CiC -Ụmụaka nọ na Nlekọta
CLA / LAC - A na -elekọta ụmụaka / na -elekọta ụmụaka
CME - Nwa anaghị agụ akwụkwọ
Isi okwu - Bekee, mgbakọ na mwepụ na sayensị: ụmụ akwụkwọ niile ga -amụrịrị ihe ọmụmụ ndị a ruo n'ọkwa nke 4
CPD - Ọganihu ọkachamara na -aga n'ihu
Creative Curriculum - E nwere ọtụtụ dị iche iche ịkọwa adị n'ihi echiche 'okike usoro ọmụmụ'. N'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ọ pụtara isiokwu ma ọ bụ isiokwu, na ndị ọzọ ọ pụtara ịjụ ụmụaka ihe ha chọrọ ịmụta.
CSS - Ọrụ Nkwado ụmụaka, nke a bụ aha ọhụrụ maka Ngalaba Ntuziaka Pupil (PRU)
DASCo - ọgbakọ ụlọ akwụkwọ mpaghara Dartford. Nzukọ obodo nke na -eme ka mmemme, nkọwa okwu, ọmụmụ na ọrụ dị n'etiti ụlọ akwụkwọ dị.
DBS - Ngosipụta & Ọrụ mgbochi - DBS na -ezo aka na ụlọ ọrụ ọhụrụ ewepụtara site na njikọta n'etiti Criminal Records Bureau (CRB) na The Independent Safetyguarding Authority (ISA), aha ya zuru oke bụ Ọrụ ngosi na mgbochi. Akwụkwọ ndenye ego na ozi enyere ga -adịgide otu mana a ga -akpọ ya DBS Checks.
DfE - Ngalaba Mmụta
Ọdịiche - usoro nkuzi dị iche iche na mmegharị nkuzi nke ndị nkuzi na -eji ụmụ akwụkwọ nwere ikike dị iche iche n'otu klaasị.
EAL - Bekee dị ka asụsụ ọzọ
EBD - Nsogbu mmetụta uche na akparamagwa
Atụmatụ EHC - Atụmatụ Nlekọta Ahụike Mmụta - Atụmatụ mmụta, ahụike na nlekọta bụ akwụkwọ na -ekwu ihe na -akwado nwata ma ọ bụ onye na -eto eto nwere mkpa mmụta pụrụ iche kwesịrị inwe. "
EMTAS - Ọrụ Nrụpụta Ndị Nta na Ndị Na -eme njem
ESOL - Bekee maka ndị na -asụ asụsụ ndị ọzọ ma ọ bụ Bekee dị ka nke abụọ ma ọ bụ asụsụ ọzọ - Ọ bụrụ na Bekee abụghị asụsụ gị, ị nwere ike sonye na nkuzi iji nyere gị aka melite Bekee gị. A na -akpọ nkuzi ndị a ESOL.
EWO - Onye na -ahụ maka ọdịmma agụmakwụkwọ
EYFS - Ntọala ntọala afọ ndị mbụ. Usoro nlekọta na Mmụta maka ụmụaka site na ọmụmụ ruo afọ ise. Nkebi a na -apụtakarị Klas ndị na -akwalite ụmụaka na nnabata.
FFT - Fischer Family Trust - usoro nyocha
FLO - Onye na -ahụ maka njikọ ezinụlọ
FSM - Nri ụlọ akwụkwọ efu
FTE - Oge zuru oke
G&T - Ndị nwere onyinye na ndị nwere nkà - Ndị nwere onyinye bụ ndị nwere ikike dị elu na otu agụmakwụkwọ ma ọ bụ karịa na ndị nwere nkà nwere eriri nwere ikike egwuregwu, egwu, ihe ngosi ma ọ bụ ime nka.
GPAS / SPAG - Ụtọ asụsụ, akara edemede na mkpoputa
HLTA - Onye enyemaka nkuzi ọkwa dị elu
HMI - Onye nlebara anya nke ụlọ akwụkwọ
ICT - Teknụzụ Ozi na Nkwukọrịta
IEP - Atụmatụ mmụta otu onye maka ụmụ akwụkwọ SEN
Nsonye - Iwepụ ihe mgbochi na mmụta ka ụmụ akwụkwọ niile nwee ike isonye na ọkwa nke ha.
INSET - Mmụta na ọzụzụ n'ime ọrụ - Ọzụzụ maka ndị ọrụ nke na -eme n'oge afọ akwụkwọ.
ISA - Njikwa Ichekwa Onwe Onye
ITT - Ọzụzụ Onye nkuzi izizi
IWB - Whiteboard mmekọrịta
KMT - Ọzụzụ Kent na Medway
KS1 - Isi ihe dị mkpa - afọ 5-7 (Afọ 1 na 2)
KS2 - Nkeji igodo abụọ - afọ 7-11 (Afọ 3,4, 5 na 6);
LA - Onye ikike mpaghara
LAA - Nkwekọrịta Mpaghara Mpaghara
LAC - na -elekọta ụmụaka
LSA - Onye enyemaka nkwado mmụta
MLD - Ihe isi ike mmụta dị obere
More ike - Higher n'ịrụ ụmụ akwụkwọ karịa ọtụtụ ndị na klas.
NC - Usoro ọmụmụ obodo
NEET - Ọ bụghị na Mmụta, Ọrụ ma ọ bụ Ọzụzụ
NGA - National Governors 'Association
NLE - Onye ndu agụmakwụkwọ mba
NOR - Nọmba na mpịakọta
NPQH - Asambodo Ọkachamara Mba maka ịbụ onye isi
NQT - Onye nkuzi ruru eru ọhụrụ
NtG - Imebi oghere ahụ
Ofqual - Office of qualifications & Regulation Regulation
Ofsted - Ọfịs maka ụkpụrụ agụmakwụkwọ
Pee - Mmụta gbasara ahụ
Tebụlụ arụmọrụ - DfE bipụtara ka atule nsonaazụ ụlọ akwụkwọ.
Ụda olu - Ụdaasụsụ na -ezo aka na ụzọ izi ndị na -asụ bekee ịgụ na ide asụsụ ha. Ọ gụnyere ijikọ ụda nke ikwu okwu Bekee nwere mkpụrụedemede ma ọ bụ otu mkpụrụedemede (dịka na ụda / k / nwere ike ịnọchite anya c, k, ck ma ọ bụ ch) na -akụziri ha ka ha gwakọta ụda. nke akwụkwọ ozi ọnụ iji mepụta mkpọpụta okwu nke okwu amaghị. N'ụzọ dị otu a, ụdaolu na -enyere ndị mmadụ aka iji ụda olu n'otu n'otu wuo okwu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a kuziri ụda maka mkpụrụedemede t, p, a na s, mmadụ nwere ike iwulite okwu "mgbata", "pat", "pats", "taps" na "nọdụ ala."
PPA - Nhazi, nkwadebe na oge ntule nke ndị nkuzi ruru eru. Ọganiru - ụmụ akwụkwọ na -etolite agụmakwụkwọ na onwe ha site na site n'afọ ruo n'afọ na site n'otu ọkwa gaa n'ọzọ n'ụzọ na -ewukwasị ihe ndị emegorola. "
PRU - Ngalaba Ntuziaka nwata akwụkwọ
PSHE Ahụike Ọha na Ọha na Mmụta akụ na ụba
PTA - Tetù Onye Nkụzi Nne na Nna
QTS- Ọnọdụ onye nkuzi ruru eru
RE - Mmụta okpukperechi
SATs - Nnwale nnwale/ihe ịga nke ọma - Nnwale na usoro ọmụmụ nke mba nke na -eme na ngwụcha ọkwa nke mbụ yana na ngwụcha igodo. Nkeji 2.
Ụlọ akwụkwọ SCITT - Ọzụzụ nkuzi nke izizi hiwere isi
SCR - Single Central Record - Ụlọ akwụkwọ ga -enwerịrị otu ndekọ etiti nke ndị okenye niile na -arụ ọrụ na ụmụ akwụkwọ. Ihe ndekọ ndị ahụ nwere nchekwa na nlele ID n'etiti ozi ndị ọzọ akọwapụtara.
Akara - Akụkụ Mmụta Ọha na Ọha
SEF - Ụdị nyocha onwe onye
SEN - Mkpa Mmụta Pụrụ Iche
SENCO - Onye nhazi mkpa mkpa mmụta pụrụ iche
Isetịpụ - Ijikọ ụmụ akwụkwọ nwere otu ike ọnụ maka naanị nkuzi ụfọdụ. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, ọ ga -ekwe omume ịnọ na setịpụrụ elu maka French na a setịpụrụ ala maka mgbakọ na mwepụ.
SIP - Atụmatụ nkwalite ụlọ akwụkwọ
SLE - Onye ndu nkuzi pụrụ iche
SLT - Otu Ndị Isi Nduzi
SMSC - Ime Mmụọ, Omume, Ọha na Ọha (mmepe)
Gụgharia - Na -ekewa ụmụ akwụkwọ n'ime ọtụtụ ọkwa dị iche iche nke ga -anọkọ ọnụ maka nkuzi niile.
TA - Onye nkuzi nkuzi
Mgbanwe - ngagharị nke ụmụ akwụkwọ site na ọkwa dị elu ruo na igodo igodo ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ yana usoro metụtara ya. "
VCOP - a na -atụ anya ka okwu, njikọta, mmeghe na ụmụ akwụkwọ akara edemede jiri ederede ha.
VLE - Gburugburu ebe mmụta mmụta